Ø Dagaallo dhex maray ciidamada Xoraynta Ogadenya iyo kuwa gumaysiga.
Ø Shir ay isku yimaadeen unugta jwxo ee Menesota ee cariga maraykanka.
Ø Wasiir kuxigeenkii wasaarda caafimaadka ee Itoobiya oo iscasilay.
Ø Wariye Itoobiyaan ah oo sheegay in lajoogo wakhtigii ay xukuumada Meles dhici lahayd.
Ø Baxsiga Ciidamada Itoobiya oo sii kordhay.
Ø Bangiyadii Itoobiya oo la dhacay.
Ø Iskuday inqilaab oo dhicsoobay.
Ø Barnamujkii aragtida halgamaaga iyo suugaan halgameed.
Dagaallo dhex maray ciidamada Xoraynta Ogadenya iyo kuwa gumaysiga.
Tuulada Koore oo duleedka Awaare ku taalla dagaal ku dhexmaray ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo ciidamada xoreeynta Ogaadeenya ayaa waxaa ciidamada cadowga lagaga dilay 2 askari, 5 kalana lagaga dhaawacay.
13/3/04, Tuulada Las-dhankaynle, oo ku taalla wadada cad ee isku xidha Qabridaharre iyo Dhamaan, dagaal ka dhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 4 askari, kuwo kalena waa lagaga dhaawacay.
21/3/04, Haar-dhagax, oo ku taalla meel u dhexaysa Fiiq iyo Baabili, iska hor imaad dagaal oo ku dhexmaray ciidamada wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya iyo ciidamada dacdaraysan ee gumaysiga Itoobiya ayaa ciidamada gumaysiga lagaga laayay askar badan oo aan weli tirsigooda la xaqiijin.
22/3/04, Meesha la yidhahdo Jadar, oo ku taalla Gobolka Nogbeed waxay ciidamada dagaalyahamiinta xoreeynta Ogaadeenya ku gubeeyn 2 baabuur oo uu lahaa sargaal sare oo Tigree ah oo lagu magacaabo Haylow. Labadan
baabuur waxay ahaayeen kuwa ciidamada gumaysiga Itoobiya ee aaggaas deggan adeegga u qaada.
24/3/04, Waxaa la gubay oo isaga iyo wixii saarnaaba ay basbeeleen mid ka mid ah baabur u rarnayd ciidamo Wayaane ah oo la geeyay agagaarka tuulada Kabti-naag, oo ku taala inta udhaxaysa Qabridaharre iyo Dhanaan.
Shir ay isku yimaadeen unugta jwxo gobolka ee Menesota ee cariga maraykanka.
waxaa maalitii axada shir balaaran isugu yimd dhammaan xubnaha jwxo ee gobalka minnesota. Shirkaas oo ahaa mid aad u qiima badan ayaa waxaa lagu qaadaa dhigay wax qaabadkii unugta jwxo ee minnesota sanadkii tagay iyo qorshayaasha shaqo ee sanadkan cusub, waxaa kale oo halkaas ka dhacday xilwareejin uu sameeyay gudigii hore ee maamulka Unugta gobolka
Minesota, xilkaas ayaa waxaa lagu wareejiyay gudi cusub oo sii daadihin doona hawlaha Unugta Sanadkan aynu ku jiro ee 2004ta. Xilwareejintii kadib ayay gudiga cusub balanqaadeen inay dardar galinayaan hawlaha halganka ee gobalka Minnesota.
Waxay shirkaas xubnuhu ku dhagaysteen khudbad qiima badan oo Telefon lagu xidhiidhinayay,ama Tell confrance ahayd oo uu soo jeedinayay M/weynha jwxo Ad-Maxaamed Cumar Cisman dhagaysi wanaagsan kadib ayuu madax waynuhu u mahadceliyay gudigii hore waxuuna tilmaamay in ay soo qabteen hawlo lagu diirsaday oo halganka waxtar wayn u soo jiiday. Gudiga cusubna wuxuu madaxwaynuhu kula dardaarmay in halkaas ay ka sii wadaan hawlaha ay umadooda u hayaan inta ay ka gaadhayaan guusha ay hig sanayaan ee xoriyada Ogaadenya.
Wasiir kuxigeenkii wasaarda caafimaadka ee Itoobiya oo iscasilay.
Wariyaha wakaaladda wararka Ogadeniya uga soo warama magaalada Adis Ababa ayaa soo tabiyay in uu iscasilay wasiir kuxigeenkii wasaarada Caafimadka ee Itoobiya Dr. Dhamise Tadhase.
Wargays afka dawlada ku hadla ayaa sheegay inuu Dr. Dhamise iskii isu casilay oo ayna wax dhibaato ah jirin lagana aqbalay codsigiisaas, hasayeeshee ilo ku dhadhaw hogaanka sare ee Itoobiya ayaa sheegaya in u khilaf wayn oo siyaasi ahi u dhaxeeyay wasiir ku xigeenka iyo wasiirka wasaarada caafimaadka ee Itoobiya, taas oo uu xalin waayay maamulka
guracan ee Meles Zenawi.
Sida la xaqiijinayo Dr. Dhamise ayaa sicad u hor istaagay dhawr jeer fasax lacagayow oo aad u tiro badan oo ay si aan sharci ahayn u kala saxeexdeen, wasaarada caafimaadka iyo niman qaata Qandaraasyo oo u dhashay qoomiyada Tigreega. Taas ayaana la tuhunsan yahay in ay ku keentay cadaadis culus oo ku kaliftay in uu is casilo.
Wariye Itoobiyaan ah oo sheegay in lajoogo wakhtigii ay xukuumada Meles dhici lahayd.
Wariye Itoobiyaan ah oo ka baxsaday xukuumada Addis Ababa ayaa sheegay in lajoogo wakhtigii ay xukuumada Meles dhici lahayd.Wariyahan oo magaciisa layidhaahdo Mengistu Woldhesilaase ayaa waxa uu u baxsaday wadanka
Ertrea oo uu magangalyo siyaasadeed ka codsaday.
Mr. Mengistu waxa kale oo uu sheegay in xaalada Meles ay kusugantahay halis oo ay u baahantahay uun in la israaciyo.
Waxayaabaha uu ku kacay ayaa makhraati ka ah in ay u dhamaatay kaligii taliye Meles oo ay ka mid yihiin mamnuucida ururada bulsho ee uu ku tuhmayo in ayna siyaasadiisa qalafsan raacsanayn, kuwaas oo uu ku badalayo kuwo
isaga dabo dhilf u noqda. Mr. Mangistu isaga oo hadalkiisii sii wata ayaa waxa uu yidhi”waa
lagama maarmaan in la xoojiyo dagaalada lagula jiro taliska wakhtigiisii dhamaaday.
Baxsiga Ciidamada Itoobiya oo sii kordhay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalda Asmara ayaa sheegaya in ay aad u sii korodhay baxsiga ay ciidamada Itoobiya baxsadaan.Waxaa todobaadkii hore isudhiibay ciidamada Eritrea 2 askari oo lakala yidhaahdo Nasser Abameche Sheikh oo katirsanaa qaybta gaadidka ee gaaska 23aad ee ciidamada Itoobiya iyo Alifle Mulugeta Ashobo Tohebo oo katirsanaa gaaska 21aad , guutada 2aad unugta 4aad.
Labadan askari ee Itoobiya ka soo baxsaday ayaa waxay ugu baaqeen askartii ay ka yimaadeen ee walaalahood ahaa in ay ka dhiidhiyaan dulmiga uu gumaysiga Itoobiya ku hayo shacabkooda, waxay kaloo ciidamada Itoobiya ugu baaqeen in aan loo adeegsan gumaadka dadka aan waxba galabsan ee sida xaqdarada ah maalin walba loo gumaadayo.
Askartan ayaa muujiyay in ay waajib tahay in lala diriro taliska sii cadceedsaday ee maxaas laayaha ah. Waxyna shacabka Itoobiya ugu baaqeen in ay hiil iyo hooba la garab istaagaan xoogaga ka soo horjeeda maamulka Adis Ababa ee dhiigyacabka ah.
Bangiyadii Itoobiya oo la dhacay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Adis Ababa ayaa sheegaya in lacag aad u tiro badan laga dhacay bangiga ganacsiga ee Itoobiya. Laanta Araadha, Bangigaas ayaa laga dhacay lacag dhan 3,5 Malyuun oo Birr, halka laanta Aqaaqi ee Bangiga ganacsigana laga dhacay 850,000 oo Birr.
Warku waxa kale oo uu intaa raaciyay in Banigiyo kale oo kuyaala magaalda Adis Ababa iyagana la dhacay, in kasta oo aan wali lasoo xaqiijin hantida dhabta ah ee ka maqan bangiyadaas kale.
Dhacan loo gaystay hantidii taalay Bangiyada ayaa mudooyinkanba laysla dhex marayay, mana jirto wax talaabo ah oo ilaa iyo hada ay qaaday xukumada Itoobiya ka talisa. Dadka ayaa isla dhex maraya in hantidaas ay inta badan dheceen saraakiisha sare ee xukuumada Zenaawi. Talaabadan ayay dadku ku tilmaameen in ay tahay mid muujinaysa burburka xukuumada, waxayna dad badan oo hantiila yaal ah ka fiirsanayaan meelihii ay hantidooda gaysan lahaayeen.
Isku day inqilaab oo dhicisoobay.
Waxaa heegan heerki ugu sareeyay ah la galiyay dhammaanba laammaha ilaalada madaxtooyada, dambi-baadhidda iyo sirdoonka dalka Sudan, kaddib markii maalintii axadda lala beegsaday inqilaab dhicisoobay guriga looga taliya dalka.
Afgambigan oo lagu doonayay in xukunka dalka lagula wareega ayaa fashilmay, waxaana illaa iyo hadda xabsiga loo taxaabay saraakiil sarsare oo dhammaantood ka tirsan xisbiga P.N.C.P waxaana ka mid ahaa hogaamiyaha xisbiga loo taxaabay Profaser Xasan Alturaabi, oo ahaa madaxa ururka isku dayayey afgambiga dhicisoobay, Laakiin mudda gaabin kaddib ayaa
boroofasoorka xabsiga laga soo daayay kaddib markii ay malaayiin taabacsan ka gilgisheen xarigga masuulka.
Mudane Alturaabi ayaa muddo howla siyaasadeed u xirnaa laakiin waxaa cafis loo fidiyay dabayaaqadii sannadkii ina dhaafay. Sida ay ii xaqiijiyeen ila xog'ogaal ah waxaa dadka ummuurtan loo xiray ka mid ah sarkaal sare oo ciidamada cirka ka tirsan kana mid ah isla xisbigan, wasiirka arrimaha dibadda dalka Sudan mudane Dr Mustafe Cismaan Ismaaciil ayaa mar wax
laga weydiiyay dadkan loo xidhxidhay inqilaabkan dhicisoobay sida laga yeeli doona ku jawaabay " xisbigan oo kaliya eedda saarimeyno laakiin cid walba oo dambigan ku caddaada waxaa la horkeeni doonaa caddaaladda".
Ma sahlana in la ogaado tirada dadka howshan loo xidhxidhay, maxaayeelay wali ummuurtu meel uma biyashuban, waaxyaha sirdoonkana waxey ku raadtaaganyihiin ciddi maskaxda howsha lagu ambaqaaday laheyd, cutubyada ciidamada dalka ee kala jaadka ahna waxaa la faray iney foojignaadaan si loo xakameeya dhacda kastoo la saadaalin karo loogana baaraandago.